FDA ကအဝလွန်ခြင်း၏ကုသမှုများအတွက် Lorcaserin HCL Approved
နိုဝင်ဘာလ 19, 2018
1 ။ FDA က Approved ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး: Lorcaserin HCL
2 ။ Lorcaserin ၏လျင်မြန်စွာခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (846589-98-8)
3 ။ လှုပ်ရှားမှု၏ Lorcaserin ယန္တရား
4 ။ Lorcaserin ကိုယူလုပ်နည်း
5 ။ လွတ်သွားသောဆေးသောက်ရန်
6 ။ ဆေးအတိုက်လွန်း
7 ။ အပိုဆောင်းသိကောင်းစရာ-off တဲ့အခါမှာ Lorcaserin အပေါ်
8 ။ Lorcaserin ၏ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
9 ။ Lorcaserin ၏သိုလှောင်မှုကို
10 ။ Lorcaserin ၏သင့်လျော်ရှင်း
11 ။ လွန်မှုမှ Lorcaserin ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
12 ။ Lorcaserin ဖြည့်စွက်
13 ။ Lorcaserin HCL အွန်လိုင်းဝယ်ယူ
14 ။ Lorcaserin HCL တွင်အကျဉ်းချုပ် (Belviq)
FDA က Approved ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး: Lorcaserin HCL
သငျသညျငွီးငှေ့ဖှယျနှင့်အသုံးမကျသောလေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းပျော့သွားတာကိုတက်ကန်ခြင်းမရှိဘဲခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးတဲ့ဘေးကင်းလမ်းကိုရှာဖွေနေပါသလား? ကြိုးစား ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး lorcaserin။ အဆိုပါဖြည့်စွက်, လုပ်ဆောင်ချက် lorcaserin ယန္တရားသည်မည်မျှထိရောက်ထွက်ရှာပါ, ထိုသို့ FDA က၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်။
ယခုကဲ့သို့အမေရိကန်လူဦးရေရဲ့အကြောင်းကို 31% အဝလွန်သို့မဟုတ်အဝလွန်ဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စာရင်းဇယား 69 နှစ်အတွင်းနေသောအရွယ်ရောက်ပြီး 20% အဝလွန်သို့မဟုတ်အဝလွန်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။ စာသား, ဒီဒီအသက်အရွယ် bracket ကအတွင်းတိုင်း 10 လူကြီးများအတွက်ကသင်သည်သားကောင်များ6မှတက်အမြည်းနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ မြင့်မားသော Schooler ၏အကြောင်း 30% အဝလွန်သို့မဟုတ်အဝလွန်ဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။
အဝလွန်ခြင်းကိုဖြေရှင်းရန်တစ်ခုတည်းသောသေချာလမ်းကိုပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း, အစားအသောက်အစီအစဉ်, အစာအိမ်တီးဝိုင်းခွဲစိတ်မှု, သို့မဟုတ်အလေးချိန်-အရှုံးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Slim ဆေးပြားအနည်းငယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်သွန်းအတွက်အတော်လေးထိရောက်သောများမှာသော်လည်း, သူတို့သည်နှလုံးအဆို့ရှင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ အပြင်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းကိုအများအပြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိခဲ့ပါပြီ။
2012 အချိန်အထိလည်း Belviq အဖြစ်လူသိများ lorcaserin ဖြည့်စွက်, ကြောင့်နေရာအတည်မပြုနိုင်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအလေးချိန်-အရှုံးဆေးညွှန်းဆေးလုံးဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမူကားအများအပြားကလူအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းအမေရိကန်သုတေသနလူ့နှလုံးပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမလေးနက်သောကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူလုံခြုံပြီးထိရောက်သောဖြစ်ဖို့ဒီဆေးလုံးသက်သေပြခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းအခြေအနေနှင့်တစ်ဦးအနိမ့်ကယ်လိုရီအစားအစာအပေါ်၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏5-10% ပျမ်းမျှဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်သုံးပြီးသူများသည်။
အဝလွန် vs. အဝလွန်ခြင်း
ဒါကြောင့်အဝလွန်နှင့်အဝလွန်အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း (BMI) 30kg / မီတာကျော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်2ထို့နောက်သင်အဝလွန်ပါပဲ။ တန်ဖိုး 25 နှင့် 29.9kg / မီတာအကြားလူမိုက်ကံကောင်းလိုလျှင်2, ထို Over-အလေးချိန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့။ ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် Synephrine HCL လုပ်ငန်းခွင်ပါသလား
အဝလွန်ခြင်း၏အမြစ်အကြောင်းမရှိအတော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဒါပေမယ့်အကြောင်းပြချက်မျိုးဗီဇ, ဇီဝဖြစ်စဉ်, ဇီဝကမ္မနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်န်းကျင် revolve ။ ဒီအခြေအနေရှုပ်ထွေးများတွင်ဆီးချိုရောဂါ, နှလုံးရောဂါ, hyperlipidemia, အသက်ရှူကျပ်, ဖက်တီးအသည်းရောဂါ, သွေးတိုးရောဂါနှင့်အချို့သောကင်ဆာမှဦးဆောင်နေသည်။
အမေရိကန်လေ့လာမှု Lorcaserin များ၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုထုတ်ဖော်ပြသ
FDA ကပဲမှုကြောင့်အများပြည်သူဝယ်လိုအားသို့မဟုတ်အဝလွန်မှုကိုနှိပ်ကွပ်အတွက်၎င်း၏ထိရောက်မှုမှ lorcaserin ဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုမှုကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိပေ။ ယင်း၏ထောက်ခံချက်မှဦးဆောင်သောသော့ချက်အချက် 3.3 နှစ်အတွင်းထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့အဓိကအမေရိကန်လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ် posted လေ့လာမှုတစ်ခုရည်ညွှန်းခုနှစ်တွင် ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်, lorcaserin အဝလွန်နှင့်အဝလွန်နှစ်ဦးစလုံးလူနာတွေအတွက်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောမူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်သထေူ၏။
အဆိုပါသုတေသီများကျပန်းအဝလွန်ဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးမျိုးသောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအခြေအနေများ၏သားကောင်များမသာခဲ့ကြသူအ 12000 လူနာရွေးချယ်ထားကြသည်။ ဤအုပ်စုထဲကနေ, ပြည်သူပြည်သားအချို့ကိုနေ့စဉ်လက်ခံရရှိရန်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည် lorcaserin သောက်သုံးသော ကြွင်းသောအရာတစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာကိုယူနေစဉ်။
တစ်နှစ်ပြီးနောက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတွင်သူတို့၏အမျိုးအ lorcaserin နှင့် 39% ပေးသောလူနာ 17% ကိုယ်အလေးချိန်အနည်းဆုံး 5% မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ကြောင်းမလုံလောကျရဲ့သော်လည်းသည်အတိုင်း, lorcaserin အုပ်စုသည်အချို့သောမူပိုင်ခွင့်လေးနက် hypoglycemia အတူတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့သော်လည်းဆီးချိုရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲတဲ့အနိမ့်အန္တရာယ်မှာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါ lorcaserin ယူပြီးသင်တန်းသားများနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်သောသူတို့ကိုအကြားခဲ့သည့်အခါဖြစ်စေအုပ်စုတစ်စုအပေါ်တိုးမြှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာများကိုမရှိမှတ်တမ်းများရှိခဲ့သည်။ သာကြောင်း lorcaserin သည်အခြားနည်းလမ်းများမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုယ်အလေးချိန် accelerates ။
Lorcaserin နှင့်နှလုံး Valve ရောဂါ
ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့ကလူ lorcaserin နှလုံးအဆို့ရှင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူချည်ထားသောစိတ်ကူးကိုဝယ်ခဲ့တာလဲ ငါ့ကိုရှင်းပြပါရစေ ...
လူ့စနစ် 14-HT receptors ၏5အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ဦး serotonin 2C agonist ဖြစ်ခြင်း, lorcaserin အဆိုပါ 5-HT ပစ်မှတ်ထား2C ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ receptors ။ ထိုအခါမူကား, ဒီအဲဒီ receptor 5-HT ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်2B နှင့် 5-HT2A receptors ။
ဤသည် 5-HT သည်မှန်လျှင်, ကြောင်းပြောရန်ဖြစ်ပါသည်2C နှိုးဆွနေသည်, အခြား receptors activated ခံရတန်းတူအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဤသည်ဤအရပ်, serotonin အလေးချိန်-အရှုံးဆေးဝါးများအတွက်နှလုံးအဆို့ရှင်ပြဿနာများနှင့်အသုံးပြုသူများကိုအကြားအဆုတ်သွေးတိုးရောဂါ၏ပျံ့နှံ့အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, lorcaserin ၏ဆှဖှေဲ့ 5-HT အပေါ်2C 100x 5-HT အပေါ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်2B receptors ။ နေ့စဉ်ဆေးထိုးသည့်စည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ သငျသညျ overdose ဆိုရင်ကန့်သတ်ထက်ကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ်နှင့်အပိုပမာဏကို receptors ၏ကျန်မှခညျြနှောငျမှရပါလိမ့်မယ်။ 5-HT ၏ activation သွားရမည်အကြောင်း2B valvular နှလုံးရောဂါ, 5-HT ၏ဆွဖြစ်ပေါ်စေသည်2A ခံစားချက်အပြောင်းအလဲ, 'မြင့်သော' 'feeling Euphoria ပီတိနှင့်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းစေပါတယ်။
လက်ရှိတွင် ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး lorcaserin 5-HT လှုံ့ဆော်သောသာကုသမှုဖြစ်ပါသည်2B နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အဆုတ်သွေးတိုးရောဂါဒီလောက်စွန့်ခြင်းမရှိဘဲ။
အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) ကပထမဦးဆုံး 2012 အတွက်အမေရိကန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာ Belviq များ၏ဆေးညွှန်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဒီအခွင့်ပြုချက် (Arena ဆေးဝါးနှင့် Eisai Inc ကိုတစ်ဦး NDA တင်သွင်းသုံးနှစ်လွန်ပြီးမှဖြစ်ပွားခဲ့သည်နယူးမူးယစ်ဆေးလျှောက်လွှာ) Lorcaserin သည်။ ဒါဟာ VET မှနှစ်နှစ်နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းကိုမပေးခင်, lorcaserin နှင့်အတူဆက်စပ်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်အပါအဝင်အချက်အလက်များ, FDA ကယူခဲ့ပါတယ်။
ယခုဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးအဘို့, Belviq FDA က၏ခွင့်ပြုချက်အနိုင်ရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံး Slim ဆေးလုံးဖြစ်ရပ်။ ဒါဟာအမေရိကန်အတွက်လိုင်စင်ရဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်သော်လည်းကသေးဥရောပတိုက်တွင်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
Lorcaserin ၏လျင်မြန်စွာခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (846589-98-8)
Lorcaserin Hydrochloride serotonin အဲဒီ receptor agonists ၏အတန်းပိုင်ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ CAS နဲ့ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည် 846589-98-8
ထုတ်ကုန်အမည် Lorcaserin Hydrochloride
ဓာတုနာမကိုအမှီ (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 846589-98-8
(ကို C °) အရည်ပျော်မှတ် 193 - 200
ပျော်ဝင် (ကို C ° 25) ·ရေ
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန် (ကို C °) -20
လှုပ်ရှားမှု serotonin 2C receptor agonist
နာမ် · APD-356
lorcaserin Hydrochloride တစ်ဦးဆေးဝါး-grade ကိုဝင်းကြောင်းသတိပြုပါ။ အများဆုံးဓာတုစတိုးဆိုင်များတွင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသော်လည်း, ကဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ့ရှိမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တင်းကြပ်စွာကိုအသုံးပြုရပါမည်။ ဒါဟာလူနာရောင်းချဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီထို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲလူ့အသုံးပြုရန်မရှိ, ။
Lorcaserin HCL လုံခြုံမှုမှာ Data Sheet
ခွဲခြားများ၏ GHS သည့်စနစ်နှင့်အညီ, lorcaserin Hydrochloride တစ်ဦးအမျိုးအစား IV နာကျင်ကျိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ codes တွေကိုသမုတ်သော; H302, P264, P301, P312 နှင့် P330 ။ ဒါဟာမျို, ရှူရှိုက်မိပါ, စားသုံးမိပါကတဆင့်, ဒါမှမဟုတ်အရေပြားနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့အပေါ်သို့အဆိပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
lorcaserin စားသုံးမိ၏အမှု၌, သန့်ရှင်းသောရေများများနှင့်အတူသားကောင်ရဲ့ပါးစပ်ထွက်ဆေးကြောပါ။ လူတစ်ဦးသတိကြောင်းအခြေအနေပေါ်, လာမယ့် 15 မိနစ်များအတွက်စပ်စွာဆေးနှင့်အတူ Continue ။ တစ်စုံတစ်ဦးကသတိလစ်လျှင်မည်သည့်ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးပေးဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့။
အရေပြားပေါ်တွင်ရေတံခွန် အကယ်. , သန့်ရှင်းသောရေနှင့်ပျော့ဆပ်ပြာ၏ copious ပမာဏနှင့်အတူ flush ။ မျက်စိပေါ်တွင် အကယ်. အကြောင်း 15 မိနစ်အဘို့ထိုသူတို့သုတ်မှတချို့ running ရေကိုအသုံးပြုပါ။ အများစုကကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးဓါတ်ခွဲခန်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနှင့်အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ထွက်တင်ဆောင်လာသောအခါအဆင်ပြေစေရန်တစ်ခု eyewash installed ပါပြီ။
အမှုအတွက်သားကောင်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေနှင့်အတူအခန်းတခန်းမှသူတို့ကိုလွှဲပြောင်း, lorcaserin HCL inhales ။ အသက်ရှူခက်ခဲဖြစ်လာပါက, အတုအသက်ရှူသုံးပါနှင့်ဆေးဝါးအကူအညီများကိုရှာဖွေကြသည်။
တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းကုတ်အင်္ကျီ, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမျက်မှန်နှင့်ဓာတု-ခံနိုင်ရည်လက်အိတ်ဝတ်ဆင်။ ဒါ့အပြင် NIOSH အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သောအသက်ရှူကိရိယာ, ကိုအသုံးပြုပါ။
အဆိုပါ, အငွေ့, ဖုန်မှုန့်, ရေမှုန်ရေမွှား, ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်မဆိုလေကြောင်းချီတ္ထုများရှူရှိုက်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ တတ်နိုင်သမျှထိတွေ့မှု၏အချိန်ကန့်သတ်။ သိုလှောင်မှုကာလအတွင်းအလုံပိတ်ကွန်တိန်နာအတွင်း lorcaserin သိုလှောင်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံကွယ်ပျောက်သည်အခြားဓာတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုသူများသည်ကနေဖွင့်သော့ခတ်ဖို့အာမခံပါသည်။
Lorcaserin စံများနှင့်ထိန်းချုပ်ထားအခြေအနေများအောက်တွင်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းပြိုကွဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအဖြစ်သို့သော်လည်းသင်တို့သည်အားကြီးသော၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းများကနေကွာစောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါဘေးထွက်နိုက်ထရိုဂျင်, ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်၏အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်ကြသည်။
လှုပ်ရှားမှု၏ Lorcaserin ယန္တရား
Lorcaserin တစ် serotonin 2C အဲဒီ receptor agonist ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလူ့ 5-HT အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်2C။ ဒါဟာအစာစားချင်စိတ်တာဝန်ရှိသည်နေသော hypothalamus အတွက်တိကျတဲ့ဓာတုပစ္စည်းပစ်မှတ်ထား။
ငါ့ကိုသိပ္ပံနည်းကျကြောင့်ရှင်းပြဖို့ Allow ... Belviq အထူး hypothalamus အတွက်, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်ဟာ 5-HT2C အဆိုပါ arcuate နျူကလိယအတွင်းလိုလားသူ opiomelanocortin အာရုံခံအပေါ်တွေ့ရှိရသော receptors ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်တဦးတည်းရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ဖို့ melanocortin-4-receptors အပေါ်သရုပ်ဆောင်ဟော်မုန်းဖြစ်သော alpha-MSH ၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ဦးနှောက်၏ဤအပိုငျး activated အခါ, ကသင်အချိန်အများစုကိုအပြည့်အဝင့်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုအချက်ပြပါလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုထိန်းညှိ။
ယူသောအခါ, မူးယစ်ဆေးအစားအစာစားသုံးမှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့် satiation ၏ခံစားချက်နှင့် ပတ်သက်. တတ်၏။ သင်ဆဲကျန်းမာနိမ့်ကယ်လိုရီအစားအစာအပေါ်အစာကျွေးပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်, Belviq သင့်ရဲ့မတရားသောကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပြီးသားဒီတော့နည်းနည်းအစာစားခြင်းအပျေါမှာအပြည့်အဝရလိမ့်မည်။ Ipamorelin အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် Ipamorelin အသုံးပြုမှုအပေါ်ကိုလမ်းညွှန်
တစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်-ဖိနှိပ်ဖြစ်ခြင်း, ကုသမှုအဝလွန်နှင့်အဝလွန်လူနာအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ အပြင်ကထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, နှလုံးရောဂါ, နှင့်အမျိုးအစား II ကိုဆီးချိုရောဂါအဖြစ်အချို့သောအလေးချိန်-related အခြေအနေများစီမံခန့်ခွဲကူညီပေးသည်။
ဒီမူးယစ်ဆေးထိရောက်သောဖြစ်ဘို့, တဦးတည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုကျန်းမာအစားအသောက်အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာနောက်ကိုလိုက်ရန်မအထူးအစားအစာဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အနိမ့်ကယ်လိုရီမှကပ်အကျိုးရှိသောနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအစဉျအပြည့်အဝနှစျတှငျ lorcaserin စီမံခန့်ခွဲလျှင်သင့်ကနဦးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ 3.5% ပျမ်းမျှဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်အချို့ရှားပါးရောဂါဖြစ်ပွားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအဘယ်သူမျှမ Slim သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်မထွက်ရရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သစ္စာရှိရှိနီးပါးသုံးလများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုသုံးကိုယူ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမပါသိသာသောအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ဤသူသည်သင်တို့ကုသမှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းနှင့်ထပ်မံမကျေနပ်မှုကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်ကယ်တင်သင့်တယ်ရှိရာအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဆယ်နှစ်ရက်သတ္တပတ်များကအချို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပေါင်မဆုံးရှုံးနိုင်လျှင်, တော့ဘူးမူးယစ်ဆေးဝါးကနေအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းမရှိမျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။
FDA ကစံချိန်စံညွှန်းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်အတိုင်း lorcaserin သာ 30kg / မီတာတစ်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း (BMI) နဲ့အရွယ်ရောက်သဖြင့်ယူရပါမည်2 နှင့်အထက်။ သငျသညျအလေးချိန်-related အမျိုးအစား II ကိုဆီးချို, သွေးတိုး, ဒါမှမဟုတ်နှလုံးရောဂါခံစားရလျှင်သင်နေတုန်းပဲသင့်ရဲ့ BMI မှာအနည်းဆုံး 27kg / မီတာကြောင်းအခွအေနေပျေါတှငျမူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီ2.
အဆိုပါလူနာနှုတ်အဆိုပါဆရာဝန်ရဲ့လမ်းညွန်နှုန်းအဖြစ်တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်တဦးတည်း 10mg တက်ဘလက်ယူသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့, သငျသညျကိုကောင်းစွာသတ်မှတ်အချိန်ကြားကာလမှာဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲသင့်သည်။ ကဝါးသို့မဟုတ်နှိမ်နင်းခြင်းမရှိဘဲတက်ဘလက်တပြင်လုံးကိုမျိုချ။ သငျသညျဖြစ်စေသင့် preference ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်ပေါ် မူတည်. တစ်မုန့်ညက်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲ lorcaserin ထိုးယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအလေးချိန်-related ရောဂါများအချို့ကိုတန်ပြန်မှသကဲ့သို့တစျဦးရဲ့တစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံး Belviq ယူအကြံပြုသည်။ သင့်ဆရာဝန်များကအကြံပေးမဟုတ်လျှင်, သင်ရပ်တန့်ဘယ်တော့မှသင့်တယ် lorcaserin ဆေးတခါသောက်.
သင်တစ်ဦးကိုသတ်မှတ်ထားသောထိုးလက်လွတ်ခဲ့သလား ဒီအတွေးကိုသင်တာမျိုးပြီးနောက်ရုံကိုချက်ချင်းပြုလုပ်ယူပါ။ ဒါကြောင့်ပြီးသားလာမည့်သောက်သုံးသောအတှကျအခြိနျအခါသို့သော်လည်းပဲသင့်ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ဇယားနှင့်အတူဆက်လက်နှင့်လွဲချော်ထိုးအကြောင်းကိုမေ့လျော့။
သငျသညျ Belviq တစ်တက်ဘလက်ထက်ပိုမိုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ် Stuff လျှင်, သင်ထို့နောက်အချို့လေးနက်လက္ခဏာတွေနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ တစ်ခုအလွန်အကျွံသုံးစွဲ၏အမှု၌, မူးယစ်ဆေးသင်တို့အပေါ်မှာယင်း၏သက်ရောက်မှုကိုယူပြီးစတင်သည်ချက်ချင်းရှေ့တော်၌အဆိပ်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာတစ်ခုလိုင်း drop ။ အဆိုပါတိုင်ကြားမှုအရေအတွက်သည် 1-800-222-1222 ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါအချို့မှာခံစားချက်အပြောင်းအလဲမူးဝြေခင်း, ပျို့, မြင့်မားတဲ့ feeling, အစာအိမ်နာကျင်ခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, သို့မဟုတ်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းပါဝင်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသိမ်းယူမှု, အသက်ရှူအခက်အခဲများသို့မဟုတ်ပြိုလဲအဖြစ်အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်အရေးပေါ်န်ဆောင်မှုများအတွက် 911 ထမြည်။ အဘယ်ကြောင့် Sibutramine ကိုယ်အလေးချိန်အတွက်ဒါလူကြိုက်များပါသလဲ
lorcaserin စော်ကားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအနည်းငယ်ဖြစ်ပွားမှုရှိပါတယ်။ မြင့်မားသောဆေးများအသုံးပြုသူ "မြင့်သော" ခံစားရစေနှင့်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအလေ့အထ-ဖွဲ့စည်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုဖြစ်ပေါ်စေရန်ထို့ကြောင့်ဖွယ်ရှိသည်။ ကြောင့်ဤသည်မူးယစ်ဆေးစတင်အာဏာတည်အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ဦးဇယား IV ပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်ခွဲခြားထားပါတယ်။
အထူးကွိုတငျကာကှယျမှုမြားတဲ့အခါမှာ Lorcaserin အလေးချိန်-အရှုံးမူးယစ်ဆေးအပေါ်
Lorcaserin ရိုက်ယူခြင်းမပြုမီ (Belviq)
သင်သည်မည်သည့်ဆေးမှမတည့်လျှင်သင့်ဆရာဝန်အသိပေးပါ။ lorcaserin အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်ဦးမတည့်တုံ့ပြန်မှုကိုလှုံ့ဆော်စေခြင်းငှါလျှင်ဆေးဝါးများ၏အကူအညီနှင့်အတူ, နည်းဥပဒေကို manual အနေဖြင့်အတည်ပြုပါ။
သငျသညျ, ဆေးညွှန်း, Non-ညွှန်း, ဒါမှမဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်အပါအဝင်တခြားကုသမှုအပေါ်များမှာလျှင်, ဆေးဝါးအကြောင်းကြားရန်အာမခံပါသည်။ ဒါကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဝါး interaction ကများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတည်ထောင်ရန်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ lorcaserin ၏ pharmacodynamics အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုကူညီပေးသည်အတိုင်းဤအရေးကွီး၏။ ရလဒ်အနေနဲ့ဆရာဝန်သင့်ရဲ့ Anti-ဆီးချိုမူးယစ်ဆေးသောက်သုံးသောညှိနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပေါ်တစ်ဦးအနီးကပ်စောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်ဖို့အနိုင်အထက်နိုင်ပါသည်။
Pharmacologically, Belviq နဲ့တခြားဆေးဝါးအကြားမူးယစ်ဆေးဝါး interaction ကအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဘုံဥပမာခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ, စိတ်ကျရောဂါ, အအေး, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းဖြစ်ကြသည်။ ဒီနေရာတွင်ပုံထဲမှာထားရန်ဆေးဝါးများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်ဦးအပြည့်အဝစာရင်း၏,
nortriptyline, trimipramine, protriptyline, amitriptyline, doxepin, clomipramine, amoxapine, ဒါမှမဟုတ် imipramine တူသောသုံးဘီးဆိုင်ကယ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants (TCAs)
fluoxetine (Sarafem), sertraline, paroxetine (Paxil), escitalopram, citalopram နှင့် fluvoxamine တူသောရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
venlafaxine (Effexor) နှင့် duloxetine အပါအဝင်ရွေးချယ် norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs)
ထိုကဲ့သို့သော linezolid, tranylcypromine, methylene ပြာ, isocarboxazid, selegiline နှင့် phenelzine အဖြစ် Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)
ထိုကဲ့သို့သောစိန့်ဂျွန်ရဲ့ wort နဲ့ tryptophan အဖြစ်အလေးချိန်-အရှုံးဆေးဝါးများ
lorcaserin အဝလွန်လူနာကိုယ်အလေးချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သတိပြုပါ။ သငျသညျဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား II ကိုရှိပါက, သင်ဆေးလုံးကိုယူပြီးစဉ်အနိမ့်သွေးသကြားဓာတ်ကြုံနေရ၏ခံရတော့မညျပါပဲ။ ထို့ကြောင့်, သင်မကြာခဏသင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သောက်သုံးသောပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိအမှု၌သင်၏ဆရာဝန်နှင့်အတူထိတွေ့စောင့်ရှောက်ဖို့သင့်၏။
zolmitriptan, sumatriptan, rizatriptan, frovatriptan, almotriptan, naratriptan နှင့် eletriptan အပါအဝင်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခေါင်းကိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး (Relpax)
အဆိုပါဆေးဝါးမဆိုအာဟာရဖြည့်စွက်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ဒါမှမဟုတ်သင်ယူနေတဲ့အလေးချိန်-အရှုံးထုတ်ကုန်များသိပါစေ။
Lorcaserin မိခင်အဘို့ကြီးစွာသောရန်သူဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ သငျသညျပြီးသားကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်မည်သည့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့စီစဉ်နေလျှင် Slim tablet ကိုသင်တို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးဖွယ်ရှိသန္ဓေသားမူမမှန်မှဦးဆောင်သင့်ရဲ့သန္ဓေသားကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအခြို့သောအကွံဉာဏျအဘို့ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ဆေးထိုး, ဖုန်းတက်တာနေချိန်မှာသင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတာနဲ့။
ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့အတိအကျ Belviq ကိုယ်ဝန်အပေါ် contraindicated သလဲ? ကိုယ်အလေးချိန်အချိန်အခါ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ဦးစွန့်ပစ်သောကြောင့်ထိုသို့ပါပဲ။ ပိုကဘာလဲ, ကြွက်များတွင်ထွက်သယ်ဆောင်လေ့လာမှုတစ်ခုအနွယ်သူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဘဝအသက်တာ၌နိမ့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒါဟာ lorcaserin စဉ်နို့တိုက်ကျွေးဖို့လည်းအကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးနို့နို့ဖြတ်သန်းနှင့်ကလေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဘယ်လိုရှင်းပြရန်မယုံကြည်စိတ်ချရသောအစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်သော်လည်းစိတ်မကောင်းထက်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ပိုကောင်းတယ်။
သငျသညျအသှေးကိုဆဲလ်သက်ဆိုင်သောအချို့နောက်ခံနှလုံးပြဿနာများနှင့်ကျန်းမာရေးကိစ္စများရှိကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားရန်သေချာပါစေ။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်;
(အပလာစမာဆဲလ်တွေအတွက်) အကွိမျမြားစှာ myelomas
လိင်တံပုံပျက်သော (Peyronie ရဲ့ရောဂါ, angulation, ဒါမှမဟုတ် cavernosal fibrosis)
သင့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာကယ်လိုရီကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်မှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကြိုးစားအားထုတ်မှုပါစေ။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတိုးမြှင်နှင့်ဆီဥကိုမီးရှို့ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်။ Lorcaserin ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အတူပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သငျသညျအမျိုးအစား II ကိုဆီးချိုရောဂါရှိပါက lorcaserin ၏အလေးချိန်-ဆုံးရှုံးမှုဆိုးကျိုးများအနိမ့်သွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသောက်သုံးသောသတ်မှတ်နှင့်ညှိပါလိမ့်မယ်သူဆရာဝန်နှင့်သင်၏အစီရင်ခံစာမျှဝေပါ။
အနည်းဆုံးတော့ဆရာဝန်သင့် system ဖြစ်ပြီး, ကိုလည်းအညီသင်အကြံပေးဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှု, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သင်၏တိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
အပိုဆောင်းသိကောင်းစရာ-off တဲ့အခါမှာ Lorcaserin အပေါ်
မြေတပြင်လုံး lorcaserin တက်ဘလက်မျိုပေမယ့်ဝါးပါဘူး, ဝေသို့မဟုတ်အရူးအမူး
အဆိုပါသောက်သုံးသောတိုးမြှင့်မထားပါနဲ့။ Belviq များအတွက်နေ့စဉ်နှစ်ကြိမ်တဦးတည်းတက်ဘလက်ယူပေမယ့် Belviq XR အဘို့, တဦးတည်းတက်ဘလက်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်လောက်ပေ၏။
သင့်ရဲ့ဆေးဝါးရန်သင့်အား Belviq အပေါ်မတိုင်မီသို့မဟုတ်နေချိန်မှာယူပြီးဖွင့်တိုင်းဆေး, ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ထုတ်ဖေါ်ဖို့သေချာပါစေ
သငျသညျ5ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်အနည်းဆုံး 12% ကိုယ်အလေးချိန်အောင်မြင်ပြီမဟုတ်ပါလျှင် lorcaserin ၏အသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်း
ဆေးသည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းငှါကတည်းကအန္တရာယ်စက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်မောင်းနှင်မှု operating ရှောင်ကြဉ်ပါ။ သငျသညျ lorcaserin သင့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အကျိုးသက်ရောက်စေတော်မမူကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချနေပါလျှင်ဒါသာလျှင်ပြုပါ
ဆည်းပူးနေ၏ lorcaserin အန္တရာယ်များကိုနားလည်သဘောပေါက်၎င်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, အသက်အန္တရာယ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ။ ရောဂါပြင်းထန်ဖြစ်လာပါလျှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာခြင်းငှါ
မကျင့် lorcaserinin ကိုသုံးပါ serotonergic မူးယစ်ဆေးဝါး, dopamine ရန်, သို့မဟုတ် tryptophan ကဲ့သို့အခြားအစားအသောက်ဖြည့်စွက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ ဒီဆေးတွေအကြားအပြန်အလှန် neuroleptic ကင်ဆာရောဂါ (ကွန်ယက်လုပ်ဆောင်မှုစနစ်) ကိုအလားတူ serotonin syndrome ရောဂါသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေဖွယ်ရှိသည်။
သငျသညျအခြို့သောနောက်ခံနှလုံးပြဿနာများရှိပါကကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး lorcaserin ယူပြီးမှတူညီကြိုတင်အကြောင်းသင်၏ဆရာဝန်အားဟောပြော
ဤသည်ဆေးဝါးသာအဝလွန်လူနာအနည်းဆုံး 27kg / မီတာတစ် BMI ရှိခြင်းအဝလွန်လူတွေကိုရန်အကြံပြုသည်2နှင့်တစ်ဦးအလေးချိန်-related comorbidity ။
သငျသညျအဝလွန်ပေမယ် 18 နှစ်ပေါင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသက်နေဆဲအသေးစားဆိုရင် lorcaserin ယူမနေပါနဲ့
လက်တွေ့သတိပြုရန်အချက်များနှင့် Lorcaserin Contraindications
သငျသညျကိုအောက်ပါအခြေအနေများရှိသည့်အခါသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးသတိနဲ့ lorcaserin ယူ. ,
ပါဝင်ပစ္စည်းများ lorcaserin မှ Hypersensitivity
bradycardia သမိုင်း (<50BPM ၏နှေးကွေးသောနှလုံးခုန်နှုန်း)
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးသွေးဖြူဆဲလ်တွေ, leukocytes, Lymphocytes, နှင့် neutrocytes အပါအဝင်သင့်သွေးရေတွက်ထိခိုက်နေသည်
စဉ်ဆက်မပြတ်သတ်သေအပြုအမူတွေ, အတှေးအ, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ရပ်များ
ကိုယ့်အရှိဆုံးမူးယစ်ဆေးလိုပဲ lorcaserin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဤရောဂါလက္ခဏာအချို့ကိုယာယီဖြစ်နိုင်သည်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မူးယစ်ဆေးဖို့ညှိအဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ အမှုအတွက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုချက်ချင်းသင့်ရဲ့ဆေးဝါးကိုဆက်သွယ်, ဆက်ရှိနေသေး။
, မကြာခဏနာကျင်, ဒါမှမဟုတ်ခက်ခဲဆီးသွားခြင်း
ထိုကဲ့သို့သောမှုန်ဝါးအဖြစ် Vision ၏အပြောင်းအလဲများကို
ရှားပါးကိစ္စများတွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုတောင်းဆိုဤအရပ်, ပြင်းထန်ဖြစ်လာပေမည်။ သူတို့ကပါဝင်သည်;
ကြွက်သား Twitch, တောင့်တင်း, ဒါမှမဟုတ်ချောင်းဆိုး
ရောင်ရမ်းလက်, ခြေထောက်, ခြေ, ဒါမှမဟုတ်လက်နက်
dissociation ၏ခံစားချက်များကို (သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကဖြစ်ခြင်း)
milky ကြောင့် prolactin တစ်ဦးမြင့်မှရင်ပတ်ကနေဘယ်တုန်းကမှစွန်
ကျနော်တို့ lorcaserin ဆေးလုံး၌ရှိသမျှသောဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း, သင်အထက်တွင်စာရင်းတွင်မကျမည်အကြောင်းတစ်ခုခုတွေ့ကြုံခံစားပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤသာထူးဆန်းအခါသမယတွင်တွေ့ကြုံတတ်၏။
အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်အပေါ်သက်ရောက်မှုအစီရင်ခံရန်သေချာစေ FDA က၏အွန်လိုင်းအစီရင်ခံအစီအစဉ်ကို။ သူတို့ရဲ့အဆင်ပြေ hotline 1-800-332-1088 ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်က လာ. အိုးထဲတွင်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်ကွန်တိန်နာ၌ဤဆေးသိုလှောင်သိမ်းဆည်း။ ကွာအစိုဓာတ်နှင့်ပိုလျှံအပူကနေထားပါ။ အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့သိုလှောင်မှုအပူချိန်ရှိပေမယ့်, စံအခြေအနေများအတွင်းမည်သည့်တန်ဖိုးကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ကို C ° 25 စုံလင်ပေမယ့် 15 တစ်အကွာအဝေး - 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေဆဲအားလုံးမှန်သည်။
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့် access ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး lorcaserin တက်သော့ခတ်။ ဆေးတစ်ထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာသည်နှင့်စော်ကားစေခြင်းငှါမှတ်ချက်ကိုယူပါ။ အပြင်ကကလေးတွေဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ဆေးညွှန်းမပါဘဲယူပြီးအခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအဆိပ်အပြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
FDA က, EPA သည်နှင့် DEA စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီတစ်ဦးဆေးဝါးစွန့်ပစ်အဖြစ် lorcaserin များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ , အိမ်သာကဆင်းရှင်းလင်းရန်ကရေရေနုတ်မြောင်းပေါ်စီးဆင်းခွင့်ပြုပါ, သို့မဟုတ်အမှိုက်မှစွန့်လွှတ်မထားပါနဲ့။ ရေထဲမှာပျော်ဝင်ဖြစ်ခြင်း, lorcaserin ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့၏နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ သငျသညျတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ဂရုတစိုက်ဆေးဝါး package ပြီးတာနဲ့သင်ကထုတ်လုပ်သူကပြန်လာကပါဝငျသောဆေးဝါးယူ-ကျောအစီအစဉ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ program ကိုလက်လှမ်းမဖြစ်လျှင်, ထုတ်ကုန် incinerate သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုဖို့မြေ၌သင်္ဂြိုဟ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်စေသူကိုလိုင်စင်ရဆေးဘက်ဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ကန်ထရိုက်တာထံမှအကူအညီရယူပါ။
လွန်မှုမှ Lorcaserin ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
တချို့လူတွေကကိုယ့်ခြောက်လ Belviq အပေါ်ပါပြီဒါပေမယ့်သူတို့တစ်တွေသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အသုံးပြုသူတစ်ပြီးသားအပြည့်အဝတနှစ်အဘို့ဆေးမသုံးမီ 20lbs ဆုံးရှုံးခဲ့ရလေသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်, ဒီလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ပဌမလအတွင်း 10 ပေါင်အထိဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
အများအပြားမှကယ်တင်သောသခင်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း lorcaserin လူနည်းစုမှထိရောက်မှုပုံရသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးမျှသာ 3lbs ဆုံးရှုံးဖို့တစ်ခုလုံးတစ်လယူမယ်လို့သွားရမည်အကြောင်း, အချို့ဆိုသိသာ lorcaserin ရလဒ်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်မဟုတ်ဘူး။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဤအုပျစုဟာသူတို့ရဲ့အစာစားချင်စိတ်သိသိသာသာတိုးပွားလာကြောင်းခံစားရတယ်။
lorcaserin ယူပြီးစဉ်အနိုင်နိုင်တစ်လပြီးစီးသောသူတို့၏အမျိုးအ 90% ကိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားရသူတွေကိုဖြစ်ကြသည်။ အများစုမှာအသုံးပြုသူများကိုအိပ်မပျော်, အရူးစိုးရိမ်စိတ်, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, လှုံ့ဆော်မှု, မူးဝြေခင်း, ပျို့ခြင်း, မမှန်နှလုံးခုန်သည်းခံမည်မဟုတ်။
လူအများစုကဤရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်အနည်းငယ်အသုံးပြုသူများဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခဏတာခဲ့တယ်ဆိုတာသက်သေအထောက်အထားပါပြီ။ ပျမ်းမျှအားတွင်, သာ lorcaserin တာ၏ပထမနှစ်ပတ်အတွင်းသိသာပါလိမ့်မည်။ အလုံအလောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်စားသုံးသူများနှင့်ပတ်သက်ပြီး 2% မဆိုသက်ရောက်မှုကြုံတွေ့ရခြင်းမရှိပေ။
အဆိုပါ lorcaserin ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း မှစ. , အသုံးပြုသူ 88% သူတို့ lorcaserin သုံးပြီးစတင်ကတည်းကသူတို့ရဲ့စားချင်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားကြောင်းကိုသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာလိုက်တယ်မတရားသောနှင့်စိတ်ခံစားမှုစားနှင့်အတူသူတို့အဘို့အကျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါဝေမျှတို့အကြားဖန်ဆင်းထားသည်ဆိုပါကတဦးတည်းမတိုင်မီ စား. အဘယ်အရာကိုအခုသူတို့အစာစားနေကြသည်, ထိုကွာခြားချက်နီးပါးတစ်ဝက်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။ စားစရာဘို့ဆန္ဒနေ့ရက်ကာလအဘို့ပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်အနည်းငယ်လူတွေတောင်မှစားရန်မိမိကိုယ်ကိုအတင်းလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူ၏စားချင်မထိခိုက်ခဲ့ကြသည်အနည်းငယ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုယ်အလေးချိန်ထိုသူတို့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်းသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။ အချို့မှ၎င်းတို့၏ Slim အစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းလေ့ကျင့်ခန်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးထက်နိမ့်အစာစားချင်စိတ်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦးပိုကြီးအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးက 30 ရက်ကြာထောက်ပံ့ရေး 330 နှစ်ကောင်များအတွက်တတ်၏။ အချို့ကအာမခံဆေးဝယ်ယူများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းမထားဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်တဦးတည်းထုတ်လုပ်သူရဲ့ကူပွန်နှင့်အထူးလျှော့စျေးကတ်များအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးကြ၏။ ဘယ်အချိန်မှာအလုံအလောက်ကံကောင်း, သငျသညျအဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် $ 50 ပေးဆောင်နိုင်ပါ။
သငျသညျထက်နည်း $ 15,000 တစ်နှစ်စေလျှင်, သင်ပိုကောင်းအဝလွန်ဖြစ်ခြင်းဆန့်ကျင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသတိပေးခဲ့ရသည်။ တစ်ဦးကအလေးချိန်-အရှုံးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုသင့်အကောင့်ဖျန်တစ်သေချာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Lorcaserin သင်သည်သင်၏စနစ်ကမိတ်ဆက်၏အနိုင်နိုင်တစ်နှစ်ပတ်တစ်ဦးစှဲလမျးသူကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးယူပြီးရပ်တန့်သူများသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
Lorcaserin လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ, ကုထုံးအသုံးပြုမှုနှင့်ဆန့်ကျင်အဝလွန်ခြင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဓာတုဒြပ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ lorcaserin နှင့် Hydrochloric acid ကိုနှင့်အတူဓာတ်ပြုပြီးသည့်အခါ Lorcaserin Hydrochloride ဖွဲ့စည်းသည်။
2. Lorcaserin ဆေးပြား
Lorcaserin နှစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုအောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျဖြစ်စေနိုင် lorcaserin ဝယ်ဖို့ HCL Belviq®သို့မဟုတ် Belviq XR®တက်ဘလက်အဖြစ်။ နှစ်ဦးစလုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်း lorcaserin Hydrochloride ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးနေ့ရက်ကာလ၌နှစ်ကြိမ်ယူခံရဖို့င်တစ် 10mg တက်ဘလက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးတွင်, shaped-ပတ်ပတ်လည် biconvex, အပြာအရောင်များနှင့်ရုပ်ရှင်-coated တစ်ဦးတည်းအခြမ်းမှာ '' တစ်ဦးက 'နဲ့' 10 '' နှငျ့အတူရှိ၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုပုလင်း 60 ဆေးပြားများ၏စုစုပေါင်းရှိပါတယ်။
ပုံသဏ္ဌာန် round; biconvex
နှိပ်ကုဒ် တစ်ဦးက; 10
ပုလင်းနှုန်းအရေအတွက် 60 တက်ဘလက်
ဤရွေ့ကားမဲဆန္ဒနယ်မှတသမတ်တည်းအထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေး interaction ကနေစဉ်အတွင်း, ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဘို့တာဝန်ရှိပါဝင်ပစ္စည်းများပပျောက်ဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။
FD & C ကအပြာရောင် #2
ဒါကနေ့ကတကြိမ်ကိုယူမယ့် 20mg တိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန်တက်ဘလက်ဖြစ်ပါတယ်။ Belviq®မတူဘဲ, ဒီအမှတ်တံဆိပ်လိမ္မော်ရောင်ဆေးပြားဖြန့်ဖြူး။ သို့သော်သူတို့က, ပတ်ပတ်လည်မှာလည်းရုပ်ရှင်-coated နှင့်တစ်ဖက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးအပေါ် '' 20 '' အပေါ် '' တစ်ဦးက '' နှင့်အတူထွင်း biconvex ဖြစ်ကြသည်။ Belviq XR®တစ်ပုလင်း 30 တက်ဘလက်များရှိပါတယ်။
နှိပ်ကုဒ် တစ်ဦးက; 20
ပုလင်းနှုန်းအရေအတွက် 30 တက်ဘလက်
Ferric oxide ကိုအနီရောင်
Ferric oxide ကိုအဝါရောင်
FD & C ကအဝါရောင် #6
အရစ်ကျ Lorcaserin HCL အွန်လိုင်း
1. Lorcaserin ကုန်ကျစရိတ်
Lorcaserin HCL ကုန်ကျစရိတ်များ
lorcaserin Hydrochloride ၏ကုန်ကျစရိတ် (846589-98-8) သင့်တည်နေရာ, သင်၌ဝယ်ယူနေတိုးနှင့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုအတွက်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဥပမာ, ထုတ်ကုန်တစ်မီလီဂရမ်ကိုသင်သလောက် $ 50 ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပိုကြီးတဲ့ပမာဏအဘို့အသွားဒေါ်လာဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းတစ်ခုခုနှုန်း 1g ဖို့စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချလိမ့်မယ်။
60 တောင့ (Belviq XR® 30 တက်ဘလက်ရှိပါတယ်) နဲ့တစ်ဦး Belviq ပုလင်းတစ်လသင်ကြာရှည်ဦးမည်က $ 220 နှင့် $ 330 အကြားကုန်ကျသည်။ စျေးနှုန်း Belviq XR® Belviq ထက်အနည်းငယ်ဒေါ်လာပိုမိုမြင့်မားကုန်ကျကတည်းကသင်ယူပါလိမ့်မယ်ယင်း lorcaserin ဆေးလုံးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့ကအာမခံကုမ္ပဏီများပေးဆောင်ဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပမာဏကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ, အရှင်, ထိုစွဲချက်၏အစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ အပြင်ကသင်လျော့နည်းပေးဆောင်အောင်, Belviq ထံမှအချို့သောအထူးကူပွန်နဲ့လျှော့စျေးကတ်များရရှိနိုင်သည်။
2. Lorcaserin Buy ရန်ကဘယ်လို HCL
Belviq ဝယ်ယူများ၏လုပ်ရတဲ့ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့အညွှန်းရှိသည်ဖို့သငျသညျလိုအပ်ပါတယ်သော FDA ကတရားပေတည်း။ သို့သော် lorcaserin များအတွက်စျေးဝယ်သင်သည်သုတေသန၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြောင်း မှလွဲ. အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ထားပါတယ်။
အများစုမှာအွန်လိုင်းစတိုး, သူတို့နှင့်အတူ account တစ်ခု register သင့်ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တယ်ဖန်တီးဖို့နဲ့စျေးနှုန်းကြည့်ရှုရန်သငျသညျလိုအပ်သည်။ သင်သည်သင်၏လှည်းဖို့အရေအတွက်ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့်အမိန့်နေရာပေးနိုင်သည်။ HCL သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါငျးတို့သသည် Modes များအတွက်လုံခြုံ lorcaserin ကတည်းကအဘယ်သူမျှမကအထူးရေကြောင်းစွဲချက်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ lorcaserin ထိန်းချုပ်ထားသလဲ?
မလှုံ့ဆော်သော်လည်း, lorcaserin မူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်ပေါ်စေဖွယ်ရှိသည်။ အဆိုပါထိန်းချုပ်ထားတ္ထုများဇယား IV မှာဥပဒေအောက်မှာဒီအကြောင်းပြချက်အဘို့, မူးယစ်ဆေးစတင်အာဏာတည်အုပ်ချုပ်ရေး (DEA) ကစာရင်း။
ဒီတော့ဘယ်လောက်သူတို့ကတဦးတည်းရဲ့သောက်သုံးသောထိန်းချုပ်ထားသနည်း? ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုအလွန်အကျွံသုံးစွဲမတော်တဆဖြစ်နိုင်သည်ထိုအခါမူကားကြောင့်လည်းအသုံးပြုသူကိုနှိုးဆွတစ်ခုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ စိတ်ဖောက်ပြန်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ရန်အတွက်, သင်သာအကြိမ်ကန့်သတ်အရေအတွက်သည်များအတွက်ဆေးညွှန်း refill နိုင်ပါတယ်။
lorcaserin များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့မှာ '' မြင့်သော 'သက်သာခြင်း, သို့မဟုတ် Euphoria ပီတိခံစား, စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အနည်းငယ်ကိစ္စများတွင်ဆေးထိုးရပ်စဲသူအချို့လူနာအချို့ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေပြ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အချက်များဆေးအဘိဥာဏ်မှီခိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုလုံလောက်စွာသက်သေဖြစ်ကြ၏။
lorcaserin များ၏ထိရောက်မှုလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အနိမ့်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့်အတူချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင် lorcaserin ယူသကဲ့သို့, ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းကသင်၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖြစ်သင့်၏။ အသုံးပြုကြတဲ့သူတွေကိုတစ်ဦးသောအဘို့ကိုလေ့ကျင့်ခန်းအစားကိုသာဆေးဝါးပေါ် မူတည်. ထက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ခရီးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဟုယုံကြည်သည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအချို့အသေးစားဖြစ်ကြပြီးတစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိသျောလညျး, အခြားသူများအလေးအနက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာပေမည်။ သုတေသနကဤဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပျက်မှုများ၏အနိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ပြသထားတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကြိမ်နှုန်းကိုခန့်မှန်းရန်အတော်လေးခက်ခဲသည်။
အဓိကကအမေရိကန်လေ့လာမှုရုံ lorcaserin နှင့်ဆက်စပ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်များ ပတ်သက်. တောင်းဆိုမှုများပယ်ချမပြုခဲ့ပေမယ့်လည်းအသစ်သောတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူတက် လာ. ။ ဤတွင် lorcaserin အန္တရာယ်များကိုခြုံငုံသုံးသပ်င်;
serotonin syndrome ရောဂါ
ဒါဟာသင် serotonin receptors တိုးမြှင့သို့မဟုတ်သက်ဝင်စေသောဆေးဝါးများနှင့်အတူ Belviq ယူသည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီးလာပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆေးဝါးများစိတ်ကျရောဂါ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, အအေးမိပြုမူဆက်ဆံသောသူတို့ပါဝင်သည်။
အနိမျ့သွေးသကြားဓာတ်သာအမျိုးအစား II ကိုဆီးချိုရောဂါခံစားနေရပြီးလူဦးအပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်သကြား level ကိုစောင့်ကြည့်နှင့်သင့်ဆီးချိုရောဂါဆေးကိုထိန်းညှိဖို့ပျက်ကွက်လျှင်သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုအန္တာရာယ်ပေလိမ့်မည်။
Lorcaserin ဆေးပြား 5-HT ၏ activation ကြောင့်နှလုံးအဆို့ရှင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေ2B receptors ။ မူးယစ်ဆေး 5-HT များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်ဤအကျိုးသက်ရောက်မယ့်အနိမ့်ဖြစ်ပွားမှုရှိပါတယ်2C အခြားအ 5-HT receptors ထက်။ လေ့လာရေး valvular နှလုံးရောဂါစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်အခါတစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ် lorcaserin နှင့်အုပ်စုနသေူမြား၏ရာခိုင်နှုန်းမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ပြပါလိမ့်မယ်ဖော်ပြသည်။
ဤသည်နာကျင်သောစိုက်ထူမှုလေးနာရီကျော်ကြာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ မကုသပါကတစ်သျှူးသို့အမြဲတမ်းရောက်သွားနိုင်သည်။
ဘယ်လောက်အလေးချိန်ငါ lorcaserin အပေါ်ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်နည်း
သငျသညျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့တစ်ဦးကျန်းမာအစားအသောက်များတွင်ထည့်သွင်းပါက, သင်ပိုမိုပေါင်ဆုံးရှုံးဖို့များပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ် 12 အားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အနည်းဆုံး 5% ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြသင့်၏။ ဤဖြစ်ပျက်ပါဘူးအခါ, သင်တို့အဘို့အလုပ်လုပ် Belviq မရှိမျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။
ပဌမလအားဖြင့် 10lbs - ငါတို့သည်အမြည်းနိုင် lorcaserin ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း မှစ. လူအများစုသူတို့ 15 အကြားဆုံးရှုံးသွားသောဖော်ပြခဲ့သည်။
သငျသညျ Belviq တစ်ခုသို့မဟုတ်အလားတူအစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်ကြိုးစားခဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ်ရှိပါသလား?
အသုံးပြုသူသက်သေခံချက် 90% lorcaserin အလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းသက်သေပြ။ လူဦးရေ၏ကျန်ရန်, ဆေးဝါးဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေသို့မဟုတ်ထိရောက်မှုခဲ့ကြပေမည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ဆရာဝန်ကသင့်သောက်သုံးသောကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းနှင့်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
တဦးတည်းအစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်သင်တို့အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့ပျက်ကွက်လျှင်, ဆေးဝါးအကြံပြုနိုင်ပါတယ်အခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ FDA က, orlistat, naltrexone (contrive), နှင့် liraglutide phentermine (Qsymia) အတည်ပြုလိုက်သည်။
Lorcaserin တွင်အကျဉ်းချုပ် HCL (Belviq)
ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး Lorcaserin ဟာအဝလွန်နှင့်အဝလွန်လူနာအလေးချိန်-related comorbidities ခံစားနေရပြီးအထူးသဖြင့်သူတို့အဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆေးကိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အများအပြားအသက်အန္တရာယ်အန္တရာယ်များနှင့်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်သင်ကဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုလိုကျနာတကြိမ်, သင်ပိုလုံခြုံဘက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။
Lorcaserin သင်သည်သင်၏တစ်ခုလုံးကိုအသက်တာ၌ပါသို့မဟုတ်ဆေးညွှန်းနှုန်းအဖြစ်ဆက်လက်အသုံးပြုလိုအပ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင် 20lbs ဆုံးရှုံးတစ်နှစ်ပြီးချိုးပေးလျှင်, အခြို့အပိုပေါင်နဲ့ဆင်တူတန်ဖိုးကိုရဖို့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေရပါတယ်။
အတော်လေးစျေးကြီးပေမယ့်, သင်ရုံ Belviq က်ဘ်ဆိုက်မှာရရှိနိုင်သည့်ငွေစု, ကူပွန်များ, လျှော့စျေးကတ်များအသုံးပြုမှုအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ lorcaserin ကုန်ကျစရိတ် သင့်ရဲ့အာမခံစွဲချက်၏အစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးလျှင်လည်းလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလစဉ်ဆေးညွှန်းအပေါ် $ 300 ဖြုန်းမတိုင်မီပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်များနှင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုချိန်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
Bohula, Erin အေ, Wiviott, စတီဖင်ဃ, McGuire, Darren K. , Inzucchi, ဆီလ်ဗီယိုအီး, et အဝလွန်သို့မဟုတ်အဝလွန်လူနာများအတွက် Lorcaserin ၏အယ်လ် .: နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး, ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်, 2018
အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု, ဆေးပစ်မှတ် Long-Term အလေးချိန်ထိန်းချုပ်ရေး, အွန်လိုင်း, 17 ဇူလိုင်လ 2012 Published
အက်ရှလေ Gustafson, Cammile ဘုရင်ဟိုဆေး AR, ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်သည်အမျိုးသားစင်တာ, PMC ဆောင်းပါးများ, MediMedia, အမေရိကန်နိုင်ငံ Lorcaserin (Belviq), အွန်လိုင်း, စက်တင်ဘာလ 2013